eHimalaya Online || News from nepal » आजको राशिफल यी निम्न राशिले बोलिमा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक, तपाइको कस्तो रहला त आजको दिन?
आजको राशिफल यी निम्न राशिले बोलिमा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक, तपाइको कस्तो रहला त आजको दिन?
२०७८ भदौ १३ गते आईतबार ०१:०६
मेष:- पैसा प्राप्त गर्न सजिलो हुनेछ। समृद्धि को साधन मा एक ठूलो खर्च हुन सक्छ। त्यहाँ जग्गा, भवन, पसल र कारखाना आदि किन्ने योजना हुनेछ। रोजगारी बढ्नेछ। प्रगतिको बाटो प्रशस्त हुनेछ। अपरिचितहरुलाई विश्वास नगर्नुहोस्। प्रलोभनमा...
मेष:- पैसा प्राप्त गर्न सजिलो हुनेछ। समृद्धि को साधन मा एक ठूलो खर्च हुन सक्छ। त्यहाँ जग्गा, भवन, पसल र कारखाना आदि किन्ने योजना हुनेछ। रोजगारी बढ्नेछ। प्रगतिको बाटो प्रशस्त हुनेछ। अपरिचितहरुलाई विश्वास नगर्नुहोस्। प्रलोभनमा नपर्नुहोला ।
वृष:- स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ। विवाद को कारण विवाद सम्भव छ। सवारी साधन र मेसिनरी को उपयोग मा लापरवाही नगर्नुहोस्। अपेक्षित कामको बाटोमा अप्रत्याशित बाधाहरु आउन सक्छन्। तनाव रहनेछ। बहुमूल्य सामानहरु आफूसँगै राख्नुहोस्। जोखिमपूर्ण र संपार्श्विक कामबाट बच्नुहोस्। अरूसँग विवाद नगर्नुहोस्। प्रदेश प्रतिनिधिहरुले सहयोग गर्नेछन्।
मिथुन:- बेचैनी हुनेछ। चोट र रोग बाट बच्नुहोस्। कामको विरोध हुनेछ। तनाव रहनेछ। अदालत र सरकारी काम अनुकूल रहनेछ। पूजामा रुचि बढ्नेछ। तीर्थयात्राको योजना बन्नेछ। लाभको अवसर आउनेछ। ब्यापार राम्रो हुनेछ। सुखको साधनमा खर्च हुन सक्छ। पारिवारिक सहयोग उपलब्ध हुनेछ। प्रलोभनमा नपर्नुहोला ।
कर्कट:- पीडा, डर, चिन्ता र बेचैनी को वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ। अदालत र सरकारी काममा अनुकूल हुनेछ। जीवनसाथी बाट सहयोग प्राप्त हुनेछ। सुख हुनेछ। अधीनस्थहरु संगको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। ब्यापार राम्रो हुनेछ। कुनै हतार छैन। बुद्धि हावी हुनेछ। स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ।
सिंह:- लेनदेनमा सावधान रहनुहोला। शारीरिक पीडा सम्भव छ। परिवारमा तनाव रहन सक्छ। शुभ समाचार पाउनुहुनेछ। आत्मविश्वास बढ्नेछ। जोखिम उठाउने साहस जुट्नेछ। दाजुभाईहरुको सहयोग मिल्नेछ। परिवार संग मनोरन्जन को एक कार्यक्रम बन्न सक्छ। ब्यापार राम्रो हुनेछ। प्रलोभनबाट बच्नुहोला ।
कन्या:- रोजगारी पाउने प्रयास सफल हुनेछ। अप्रत्याशित लाभ हुन सक्छ। ल,टरी बाट टाढा रहनुहोस्। व्यापार यात्रा सफल रहनेछ। एउटा ठूलो समस्या बाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। आम्दानी बढ्नेछ। खुशी बढ्नेछ। पारिवारिक चिन्ता रहनेछ।
तुला:- अप्रत्याशित खर्चहरु आउनेछन्। तपाइले ऋण लिनुपर्ने हुन सक्छ। स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ। विवादमा फस्न सक्नुहुन्छ। चिन्ता र तनाव रहनेछ। जोखिम नलिनुहोस् घर बाहिर असहयोग रहनेछ। अपेक्षा ढिलो हुनेछ। आम्दानीमा कमी आउन सक्छ।
वृश्चिक:- बकाया वसूल गर्ने प्रयास सफल हुनेछ। व्यापार यात्रा सफल रहनेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोतहरु प्राप्त हुन सक्छन्। ब्यापार ब्यबसायमा नाफा हुनेछ। प्रेम सम्बन्ध मा अनुकूलता रहनेछ। बहुमूल्य सामानहरु आफूसँगै राख्नुहोस्। बेचैनी हुनेछ। तपाइँ थकित महसुस गर्नुहुनेछ। वरिष्ठले सहयोग गर्नेछन्।
धनु:- शत्रुहरु झुक्नेछन्। विवादलाई प्रोत्साहन नगर्नुहोस्। प्रयास सफल हुनेछन्। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ। आम्दानीका स्रोतहरु बढ्न सक्छन्। ब्यापार राम्रो हुनेछ। चोट र रोग बाधा पुग्न सक्छ। व्यर्थ खर्च हुनेछ। तपाइँ मातहतको सहयोग पाउनुहुनेछ। सुख हुनेछ। कुनै हतार छैन।
मकर:- आफ्नो बोली नियन्त्रण गर्नुहोस्। कसैको व्यवहारले समस्या निम्त्याउन सक्छ। पुरानो रोग फेरी बिग्रन सक्छ। तपाइँ दुखी समाचार पाउन सक्नुहुन्छ, धैर्य हुनुहोस्। जोखिमपूर्ण र संपार्श्विक कामबाट बच्नुहोस्। प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ। पारिवारिक चिन्ता बढ्नेछ। आवश्यक सामानहरु समयमै उपलब्ध हुने छैनन्। तनाव रहनेछ।
कुम्भ:- नयाँ आर्थिक नीति बनाइनेछ। प्रणाली सुधार हुनेछ। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ। साझेदारहरुको सहयोग प्राप्त हुनेछ। व्यापार सम्झौता बढ्न सक्छ। समय को सदुपयोग गर्नुहोस् व्यापार यात्रा सफल रहनेछ। आँखा दुख्न सक्छ। त्यहाँ कानूनी बाधा हुन सक्छ। विवाद नगर्नुहोस्।
मीन:- पैसा कमाउन सजिलो हुनेछ। बिद्यार्थी वर्गले सफलता हात पार्नेछ। पढाइमा रुचि बढ्नेछ। लामो यात्राको योजना बन्नेछ। तपाइँको मनपर्ने खानाको आनन्द लिनुहोस्। तपाइँ वरिष्ठहरु बाट मार्गदर्शन पाउनुहुनेछ। जीवनसाथीको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता हुनेछ। स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ। बेचैनी हुनेछ।
प्रकाशित मिति २०७८ भदौ १३ गते आईतबार ०१:०६